GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Nzema Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Baịbụl kwuru na mkpụrụ obi nwere ike ịrụ ọrụ, o nwere ike imetụ ozu aka, agụụ nwere ike ịgụ ya. O kwukwara na mkpụrụ obi na-eri nri, na-erubekwa isi n’iwu. (Levitikọs 5:2; 7:20; 23:30; Diuterọnọmi 12:20; Ndị Rom 13:1) Ọ bụ mmadụ nwere ike ime ihe ndị a, ọ bụghị ihe dị́ n’ime mmadụ.
“Mkpụrụ obi ahụ nke na-emehie, ya onwe ya ga-anwụ.”—Ezikiel 18:4, 20, Bible Nsọ nke Union Version.
N’Izrel oge ochie, ahụhụ kacha njọ a na-ata onye mere mmehie dị oké njọ bụ na ‘a ga-ebipụ mkpụrụ obi ahụ.’ (Levitikọs 19:8, Bible Nsọ nke Union Version) “A ga-egbu” onye ahụ.—Ọpụpụ 31:14, Bible Nsọ Ọhụụ.
Na Baịbụl, ihe ọzọ a na-akpọ “mkpụrụ obi” bụ “ndụ.” Dị ka ihe atụ, na Job 33:22, a sụgharịrị okwu Hibru ahụ bụ́ neʹphesh “mkpụrụ obi,” sụgharịakwa okwu ya na ya yiri “ndụ.” Baịbụl gosikwara na mmadụ nwere ike itufu mkpụrụ obi ya ma ọ bụ ndụ ya, ma ọ bụ tinye ya n’ihe ize ndụ.—Ọpụpụ 4:19; Ndị Ikpe 9:17; Ndị Filipaị 2:30.
Ebe ọ bụ na “mkpụrụ obi” pụtara “ndụ,” ọ gaghị esiri anyị ike ịghọta ihe Baịbụl na-ekwu mgbe ọ sịrị na mkpụrụ obi “na-apụ” ma ọ bụ “pụwara.” (Jenesis 35:18; Bible Nsọ nke Union Version) Ihe okwu ahụ pụtara bụ na onye ahụ anwụwala. Otú ụfọdụ Baịbụl si sụgharịa ihe a e dere na Jenesis 35:18 bụ “mgbe ọ na-ekubi ume.”—Baịbụl Nsọ: Nhazi Katọlik; Bible Nsọ Ọhụu.
Chineke achọghị ka e were echiche mmadụ gwakọta n’ihe e dere n’Okwu ya, bụ́ Baịbụl, dị́ ka nkụzi ahụ bụ́ na mkpụrụ obi anaghị anwụ anwụ. Kama nke ahụ, Baịbụl dọrọ anyị aka ná ntị, sị: “Nọrọnụ na nche: ma eleghị anya, a pụrụ inwe onye ga-eburu unu dị ka anụ oriri ya site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ si dị.”—Ndị Kọlọsi 2:8.
^ para. 3 Gụọ akwụkwọ aha ya bụ The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, peeji nke 659, nakwa nke aha ya bụ Lexicon in Veteris Testamenti Libros, peeji nke 627. Ọtụtụ Baịbụl sụgharịrị okwu bụ́ neʹphesh na psy·kheʹ “mkpụrụ obi,” “ndụ,” “mmadụ,” “ihe e kere eke,” ma ọ bụ “ahụ́” n’ebe dị iche iche n’adabere n’ihe a na-ekwu.
Gụọ ihe Baịbụl kwuru banyere mkpụrụ obi.
Ị ga-amụta ihe Baịbụl kwuru banyere ndị nwụrụ anwụ na ihe mere ndị mmadụ ji anwụ anwụ.
“Mkpụrụ Obi” na “Mmụọ”—Gịnị n’Ezie Ka Okwu Ndị A Pụtara?